downloads 5 561
N'ihi na ihe nlereanya dakọtara na FSX pịa ebe a
Ikenyeneke mbiet mmeputakwa nke elu àgwà, ihe niile a gụnyere: Ụda na, mebere kokpiiti na nlereanya.
Jide n'aka na-agụ onye ọrụ ntuziaka na French. Nwere 9 repaints. The Dassault Mystère IV bụ a 1950s French fighter-otu bombu ugbo elu, nke mbụ transonic ugbo elu ịbanye na ọrụ dị French Air Force.
Kere na mmepe
The Mystère IV bụ ihe evolutionary mmepe nke Mystère II ugbo elu. Ọ bụ ezie na agba na mpụga oyiyi ahụ na mbụ ụgbọ elu, na Mystère IV bụ n'ezie a ọhụrụ imewe na aerodynamic ndozi maka supersonic ụgbọ elu. The prototype mbụ ama on 28 September 1952, na ugbo elu banyere ọrụ na April 1953. The mbụ 50 Mystere IVA mmepụta ugbo elu na-kwadoro site na British apụta-Royce Tay turbojets, mgbe ndị fọdụrụnụ nwere French-wuru Hispano-Suiza Verdon 350 version nke na engine.
arụmọrụ akụkọ ihe mere eme
French Mystère IV Dị na Bitburg Air Base (Germany), n'oge 1960s
Israel Mystère IVs hụrụ edinam n'oge Arab-Israeli Agha na e jikọtara ejikọta site na French Mystères maka Suez nsogbu. On 8 June 1967, Israel ugbo elu socha mwute na controversial agha na USS Liberty.
India procured 104 ndị a ụgbọ elu ke 1957. E ji ọtụtụ n'ime Indo-Pakistani War of 1965. On 7 September 1965, skwodron Onye Ndú Ajjamada Devayya nke Indian Air Force gbara ala a F-104 Starfighter nyere n'iwu site Flight Lieutenant Amjad Khan nke Pakistan Air Force na a wakporo n'elu Sargoda. Amjad jisiri akara ọtụtụ wɔfrɛ wɔn T on Devayya si Mystère ma kwere ka e bibie, otú ọ kwụsịrị anya n'ihi na ọzọ lekwasịrị. Otú ọ dị, Devayya si Mystère ka operable, o ọma gbara ala ahụ Starfigher. Devayya e gburu ma ọ bụ jiri obere oge. A agha ahụghị ke India ruo mgbe e mechara kwuo na John Fricker akwụkwọ Battle for Pakistan. Devayya e ọdịda nke Maha .Salmo Chakra mgbe ọ nwụsịrị 23 afọ mgbe agha.
The phasing si na ugbo elu malitere n'oge na-adịghị mgbe 1965 Indo-Pakistani War, ma ọ hụrụ ihe ọzọ edinam ke Indo-Pakistani War of 1971. Ọ na-kpam kpam phased si Indian Air Force site 1973.
Onye edemede: Andre Chancel, RESTAURAVIA